Ny fomba hifidianana skateurs ho an'ny fifaninanana skate sy hockey ho an'ny mpandray anjara amin'ny habeny sy ny haben'ny tongotra?
Ahoana no fomba hifidianana skateurs ho an'ny skiing tsara?
Ny fiarandalamby amin'ny gilasy, maro ny olona mieritreritra ny fomba hifidianana skate. Mety ho, ny mifidy ny habe sy ny zava-drehetra, fa mety tsy ampy izany. Ny fahazoana mivezivezy amin'ny hetsika dia ny fiantombohan'ny fampivoarana bebe kokoa amin'ity fanatanjahantena ity, manomboka eo amin'ny sehatra matihanina.
Ahoana ny fisafidianana ny soavaly marina?
Alohan'ny handehananao mividy, tandremo ny tongotrao. Tritan-javatra izany, saingy tsy tokony hihetsiketsika izy ireo. Aza mitondra kiraro maro loatra, satria ny modely maoderina rehetra dia tonga amin'ny fisamborana tsara, mety amin'ny asa aman-draharaha ivelan'ny trano, na manokana ho an'ny lalamby an-dalamby, fa efa avo lenta kokoa. Ny tena manan-danja dia ny mamaritra ho an'ny tenanao izay skateurs dia, noho izy ireo misy karazana telo:
Ny fahafantaranao ny fomba hifidianana skate, dia hanome toky ianao fa tsara ny mandeha fiaramanidina, na dia amin'ny ambaratonga fototra aza. Maka mpivady iray, miezaha mandehandeha ao anaty fivarotana, mba hahazoana antoka tsara ny fanamafisana azy ireo eo amin'ny tongotra. Raha ny momba ny fitaovana, dia tsy misy famaritana marina, satria ny tsirairay dia mifantoka amin'ny zavatra tsara ho azy. Izy ireny dia vita amin'ny hoditra marina, kanto ary plastika.
Ahoana ny fisafidianana skate hockey?
Milaza ny manam-pahaizana fa karazany roa ny modely hockey, ny sasany amin'izy ireo dia natao ho fanatanjahan-tena amin'ny zava-bita tsara sy ho an'ny mpankafy. Ny dikan-teny tsotra dia tsy hiaro ny tongotra tsy hikapoka kitapo na tapa-kazo, ary amin'ny ankapobeny, amin'ny ratra, saingy mandany vola imbetsaka kokoa. Izany karazana tsara ho an'ny mpinamana na mpitia fotsiny. Ireo atleta za-draharaha dia mahafantatra ny fomba hikarakarana fiarandalamby hockey ho an'ny fifaninanana matihanina izay tsy hamela azy ireo hilalao mandritra ny lalao.
Ny mari-pamantarana lehibe amin'ny fiakaran'ny kalesy hockey dia ny henjana. Indrindra indrindra amin'izany, mampiditra plastika na polystyrène izy ireo mba hanamafisana tsara ny tsylon - ny fitaovana izay anaovana azy. Mihevitra ny ho avin'ny mpifidy ny rehetra, efa zatra mitandrina ny vidiny. Indrisy, ny avo kokoa ny vidiny, ny tsara kokoa dia ny kiraro fanatanjahan-tena.
Ahoana ny fisafidianana ny fiaramanidina?
Toy ny fitaovana ara-panatanjahantena hafa, dia tokony hanaraka fepetra sasantsasany ny fiarandalamby ho an'ny artista. Satria io karazana io dia samy hafa amin'ny hockey, izay manana rafitra samihafa, dia voafidy araka ny fanao sy ny endriky ny lelany. Ny tongotra eo amin'ny toe-tanana dia manampy amin'ny fanaovana pirouettes tsara ary tsy manelingelina ny firoboroboana. Aza hadino ny momba ny voditongotra, izay mifehy tsara ny ivon'ny saina.
Ny fahafantarana ny fomba hisafidianana skateurs ho an'ny milalao baolina, na ny mpilatsaka an-tsitrapo dia hahatsiaro ho toy ny kintana eny amin'ny ranomandry. Ankehitriny izy ireo dia manandrana ny dikan-hoditra vita amin'ny hoditra, miaina tsara kokoa izy ireo ary mandany ny tongotra mandritra ny fotoana fohy, noho izany dia tsy mahasoa foana ny manofa azy ireo, satria mianatra ny tsy haka azy ireo. Toy ny amin'ny hockey, dia mafy ny fahamendrehana. Mba hampitomboana izany, ho an'ny matihanina dia manamboatra modely misy saropady vita amin'ny hoditra telo.
Iza no soavaly hifidy ho an'ny mpandray anjara?
Mifidy ny fiaramanidina tsara indrindra ho an'ny milalao baolina kitra, dia manapa-kevitra hoe inona no tanjonao eo amin'ny fananarana ara-panatanjahantena. Raha fialamboly fialam-boly fotsiny izany, dia mila mandray safidy tsara indrindra ianao, izay zavatra toy ny milina. Tsara kokoa ny mianatra ny ranomandry eo amin'izy ireo, satria tsy hitondra fahavoazana ho an'ny mpirotsaka izy ireo. Ampiasao amin'izy ireo tokoa mandritra ny iray volana, ary raha tianao ny hifindra amin'ny dika kokoa kokoa. Mifidy akanjo manokana ho an'ny mpandray anjara, mila mifantoka amin'ireto hevitra manaraka ireto isika:
Ahoana ny fisafidianana ny fiaramanidina mety?
Mba ho mora kokoa ny misafidy skate lehibe, ataovy azo antoka fa miezaka ny ho tahaka azy ireo ianao. Raha tsy mahatsapa ny tsy fahatsapana ny tongotra, dia angamba io safidy io no mety indrindra. Inoana fa ilaina ny mividy kiraro atletika ho an'ny antsasany mahery raha oharina amin'ny mahazatra, mba hahafahany manao satroka mafana. Tsy tokony hividy azy ireo amin'ny fitomboana ianao, toy ny ataon'ny ray aman-dreny matetika. Mety hampitombo ny loza mety hitranga izany ary hisorohana ny fampiofanana mahazatra amin'ny hetsika amin'ny gny. Ny fahafantaranao ny fomba hisafidianana ny fiaramanidina dia afaka milalao fanatanjahantena ianao ary mahazo fahafinaretana amin'izany.
Ny fomba hifidianana skate eo amin'ny sakan'ny tongotra?
Misy ny toe-javatra misy ny tongotr'olombelona dia somary lehibe kokoa noho ny mahazatra, ary ny fomba hahitana ny fahatanterahan'ny fiarandalamby ho an'ny tongotra toy izany dia tsy fantatry ny maro. Ny modely vita amin'ny hoditra dia manana traikefa hitafy, ary azo atao ny manaraka ny tongotra rehefa afaka kelikely, saingy lafo kokoa ny vidiny. Manoro hevitra ireo manam-pahaizana mba handrefesana ny safidy avy amin'ny orinasa samihafa, satria mitranga izany amin'ny kiraro hafa. Raha tsy nanampy izany, dia makà kiraro kely kokoa, ary asio tavy na lamba malemy amin'ny tongotrao.
Sportswear ho an'ny zazavavy
Mozika rhythmika ho an'ny fampiofanana
Ahoana no hisafidianana akanjo ho an'ny mpilalao tabilao amin'ny latabatra?
Kapila ho an'ny dobo
Ahoana no hanitsiana ny fihetsika?
Ice Palace Ice Palace
Rindrina brikasy ao anatiny
Sakafo Dior - ahoana no hanavaka ny hosoka avy amin'ny kitapo voalohany avy amin'i Christian Dior?
Ahoana ny fomba hampianarana puppy iray amin'ny toetr'andro?
Vitrum ho an'ny vehivavy bevohoka
Fanampiana mahomby amin'ny fikolokoloana kibo sy ny lafiny
Sakafo amin'ny teny frantsay avy amin'ny kisoa
Shampoo maina - ny fanombanana ny vokatra tsara indrindra ary 2 fomba tsotra
Ahoana no fomba hampianarana alika ny ekipa maty?
Ordinatera ho an'ny mpiasa ho an'ny mpianatra voalohany amin'ny famenoana
Ny "Imagine the Tower of the World"